EZINE IXESHA EZINE WATERFRONT COTTAGE ELAKE EUGENIA
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPaula & Chris
Yiba namava eembono zechibi ngaphambili kwiRed Rooster Point Cottage kwiLake Eugenia. Yonwabela ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinembono evulekileyo evulekileyo yokuhlala kunye nendawo yokutyela, indawo yokulala etofotofo kunye neendawo ezinkulu zokuhlala zangaphandle. Izithuba ezingaphandle zibandakanya indawo enkulu, ephakamileyo, idokhi yelanga enendawo yokuqubha (ecocekileyo kwaye akukho khula), umgodi womlilo opholileyo kunye nebhafu eshushu.
Ukuqhuba okufutshane ukuya kwindawo eparadesi kunye nobutofotofo bekhaya (ngaphantsi kweeyure ezi-2 ukusuka eToronto).
Indawo yethu epholileyo, yesizini emine, indlwana yosapho ibekwe kwiLake Eugenia, ethathwa ngokuba "yindawo efihlakeleyo yeGrey County". Ukuhlala ngaphandle kunye namava ayimfuneko kwiindwendwe eRed Rooster Point. Yonwabela oku kulandelayo:
Indawo enkulu yabucala enemibono ye-180 degree echibini. Idesika yenzelwe intuthuzelo kunye nezitulo zegumbi lokuphumla kunye neseti yokutyela yangaphandle. Yonwabela ibhafu yethu eshushu etshoneyo ukuze uphumle emva kosuku lokuzonwabisa eGrey County. Qokelela kwindawo yomlilo ekufuphi nechibi- eyona ndawo ifanelekileyo yokosa imarshmallow.
I-cottage icocekile kwaye ineenkonzo ezilungileyo zosapho. Umbono ovulekileyo wokuhlala / wokutyela / ikhitshi uphuma usiya kumgangatho wethu omkhulu oneembono ezikhethekileyo zechibi. Umgangatho osezantsi unamagumbi okulala amathathu anefestile yebakala elingaphezulu. Ifoya esezantsi iboleka njengegumbi lodaka elinamagwegwe amaninzi okunxiba ngaphandle.
Oku ‘kurhoxa kufanelekileyo’ kwamkela iindwendwe ezikufutshane noluntu’ ukutya okutyebileyo, ubugcisa kunye nenkcubeko yokwenza! Ifakwe kwimizuzu engama-25 kwezi dolophu zincinci zidumileyo: iClarksburg, iHeathcote, iCollingwood, iThornbury, iKimberley, iFlesherton, iMeaford, iMarkdale. Sibekwe kwindawo evumela iindwendwe ukuba zifikelele kwiindlela zikaBruce, iindlela zokuhamba ngeebhayisikile, uMlambo iBeaver kunye nabavelisi bokutya basekhaya kunye neendawo zokutyela.
Umbuki zindwendwe ngu- Paula & Chris
Our passion for acquiring unique properties in one of the most beautiful regions in Canada, The Grey Highlands, began in 2007 with the goal of providing our family, new and loyal guests a place to have fun, relax, unwind and be inspired. We welcome you to explore H6 Cottage, H6 Farm and H6 Historic.
Our passion for acquiring unique properties in one of the most beautiful regions in Canada, The Grey Highlands, began in 2007 with the goal of providing our family, new and loyal g…
Siyafumaneka kunxibelelwano ukuba kukho naziphi na iinkxalabo okanye imibuzo evelayo - sijonge ukuhambisa amava afanelekileyo okuhlala!
UPaula & Chris yi-Superhost